ကျွန်တော်တို့က ဘာတွေလဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ လဝကသွား တောလား
မြစ်ကို အလျားလိုက်ကူးခိုင်းထားခံရသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် »
ဒီနေ့ ပြင်ဆင်ချက်ကတော့ ပါလာသည်။ “မွတ်စလင်မ်ကုလား” အစား “ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ” တဲ့။
မူလ ခေါ်ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း “ကုလား”၏ မူရင်းသဘောတရားလည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ မူရင်းကကဲ့သို့ နွေးထွေးမှု မရှိသော၊ ခွဲခြားလိုသော၊ အပြစ်မြင်လိုသောသဘော အတော်ဆောင်လာသည်။ ကုလားဒိန်၊ ကုလားကပြား၊ ကုလားမျိုးမစစ်၊ ဇေကပြားစသည့် စသည့် စကားလုံးများက မူလက ရှိခဲ့သည့် ပသီကုလားများ လက်သင့်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဖြစ်လာသည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်တော်တို့ အဖိုးများခေတ်က ပသီကုလားများသည် တစ်ဖက်က တို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ စသည်တို့တွင် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တစ်တပ်တစ်အားမှ ကဏ္ဍစုံ ပါဝင်ခဲ့ကြသလို တစ်ဖက်ကလည်း မိမိတို့အား ခွဲခြား ရှုမြင်သော အသုံးအနှုန်း “ကုလား”ဟူသည်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ် နိုးကြားရေးအဖွဲ့ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များ ဖွဲ့ကာ မိမိတို့သည် ကုလား မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ နည်းတူ ဒီမြေဒီရေတွင် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နှစ်ပေါင်းရာချီ နေထိုင်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ဆိုခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့သည် ဗမာမွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။
၀မ်းနည်းဘိ၏။” ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် မိမိတို့သည်လည်း ဗမာများဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ “ဗမာကို ဗမာကသိရေး” ဆိုကာ မိမိတို့ ဗမာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည်လည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နည်းတူ ဗမာဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်လက်အောက်ရှိ အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သော ဗမကကို ဖျက်ခိုင်းစဉ်တွင်လည်း “ဗမက က ဗမာတွေပါ။ မွတ်စလင်မ်ဘာသာယူထားတဲ့ ဗမာတွေပါ။” ဟူသောစကားကို သုံးခဲ့သည်။ (၁၉၅၅ ဒီဇင်ဘာ၃၀ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)
၁၉၈၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ အလုံလမ်းရှိ သမ္မတအိမ်တော်တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် မဆလဥက္ကဋ္ဌကြီး (တရုတ်ကပြားတစ်ဦးဖြစ်သည့်) ဦးနေဝင်း၏ မိန့်ခွန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကုလား၊ ကုလားပြည်စသည့် အသုံးအနှုန်းများ လှိုင်လှိုင်သုံးကာ ဧည့်နိုင်ငံသားဟူသည်ကို စတင်ပြောခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းတွင် ရှိနေသည့် ကုလားများ (တရုတ်များလည်း သူ့မိန့်ခွန်းတွင်ပါပါသည်)သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သစ္စာဖောက်များပမာ သုးံစွဲသွားခဲ့ပါသည်။ (၁၉၈၂အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့ The Working People’s Daily အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဆိုပါမိန့်ခွန်းဘာသာပြန် ပါရှိခဲ့သည်။)
၁၉၉၆ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားသို့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်တက်ရောက်ကာ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ရာတွင် “ဗမာပြည်ဖွား ဗမာမွတ်စလင်မ်များသည် ဗမာသာဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ကုလား ဖြစ်မသွား” ဟု ဆိုပြန်သည်။ နိုင်ငံတော် သတင်းစာများကလည်း အဆိုပါစကားရပ်ကို ကိုးကား ဖော်ပြခဲ့ကြပြန်သည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖြစ်လာစေရန် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ မဟာသရေစည်သူဘွဲ့ရ သံအမတ်ကြီးဦးဖေခင် မကွယ်လွန်မီက ညီလာခံတစ်ခုတွင် “တို့ဗမာပြည်က ဗမာမွတ်စလင်မ်တွေအားလုံး ကုလားတွေကွ၊ နိုင်ငံခြားက ကူးလာတဲ့ မျိုးမစစ်တဲ့ကောင်တွေကွ၊ တို့ကို ကုလားလူမျိုးလို့သာ မှတ်ပုံတင်မှာ မင်းတို့ သတ္တိရှိရင် သတ်မှတ်ကြ…”ဟုဒေါသတစ်ကြီး ခံစားချက်တစ်ကြီး ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း ထိုညီလာခံတွင် တက်ရောက်ခဲ့သူများ ပြန်ပြောပြသည်ကို ကြားဖူးပါသည်။
အဖိုးလေးဖြစ်သူ ဦးညီညီကလည်း ဆုံးခါနီးနောက်ပိုင်းအချိန်တွင် “ငါက ကုလားကြီးကွ၊ ငါက ကုလားကြီးကွ” ဟု တစ်ဖွဖွပြောခဲ့ပြန်ပါသည်။
အသက် ၂၃နှစ် အရွယ်ထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ ထင်ခဲ့သူ။ ထိုစဉ်ကမှ ညီငယ် ၁၈နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် ပြောင်းရတော့ တစ်မိသားစုလုံး၏ အိမ်ထောင်စုဇယားတွင် လူမျိုး ဗမာ ရှေ့တွင် အိန္ဒိယ ထပ်ပေါင်းခံရသူ။ ကျွန်တော့်သား မွေးတော့ အိမ်ထောင်စုဇယားတွင် ထည့်သွင်းချိန်တွင် သူ့လူမျိုးက “အိန္ဒိယ+ဗမာ+ ဗမာ+ အိန္ဒိယ+ပလောင်” ပါတဲ့။
မကြာမီ နှစ်ပေါင်း ၂၀၊၃၀ အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပါတော့မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရှိနေသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း ထိုစာရင်းတွင် ပါဝင်ကြပါမည်။ ထိုသူတို့ကို ဘာလူမျိုးဟု သတ်မှတ်ပါမည်လဲ။ တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ကုလား လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်မည်လော။ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ မကြာမကြာ သုံးစွဲနေသည့် ဘင်္ဂါလီဟု စာရင်း သွင်းပေးမည်လော။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သမီး မှတ်ပုံတင်တွင် ပါသလို အိန္ဒိယလူမျိုးလော။ (အတော် အထာမကြသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားသာရှိသည်၊ အိန္ဒိယလူမျိုးဟူ၍ မရှိ။ ဟင်ဒီလူမျိုးသာ ရှိမည်။ နိုင်ငံတစ်ခုအမည်နှင့် ဗမာ တွဲဖက်အဖော်ပြခံနေရသော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလူမျိုးအမည်သည် ရှာမှရှားဟု ဆိုရမည့် အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။) မည်သည့် မူနှင့် ဆက်သွားကြပါမည်လဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေသည် မပြည့်ဝသော နိုင်ငံသားလား။ တစ်ပိုင်းတစ်စ နိုင်ငံသားလား။ မိမိတို့၏ မွေးရာပါအနေအထားအရ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိဘဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်နေရသော ဘာမှန်းမသိသည့် သတ္တဝါများလား။ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ခြင်း မရှိပါခင်ဗျား။ နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုစဉ် “ ဒါတို့ပြည်၊ ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ”ကို လိပ်ပြာလုံလုံ ဆိုခွင့် ရှိသောသူများ ၊ ဒီမြေဒီရေကို ချစ်ပိုင်ခွင့် ရှိသောသူများ ဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျား။
ကုလား၊ ကပြား၊ သွေးနှော၊ အိန္ဒိယဗမာ၊ ပသီကုလား၊ မျိုးမစစ်၊ ဗမာမွတ်စလင်မ် မည်သို့ခေါ်ခေါ် ကျွန်တော့်တွင် (အနည်းဆုံး အထက်အဆက် ၄ဆက်တွင် မဟုတ်သည့်) မည်သည့် အဆက်အနွယ်ကမှန်း သေချာမသိသော နိုင်ငံခြားသားသွေး (ကုလားသွေး) ပါပါသည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဗမာသွေး တိုင်းရင်းသားသွေး ပါပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့သည် ဒီမြေမှာပဲနေကြကာ ဒီမြေမှာပဲ သေကြရမည့် မနည်းလှသည့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒီမြေဒီရေတွင် ကြီးပြင်းလာရသည့် ကျွန်တော်တို့တွင် အခြားလည်း သွားစရာ မရှိ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားထွက်လျင်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတ်မှတ်သည်က ကျွန်တော်တို့ “ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ”သည် အခြား နိုင်င်ငံသားများနည်းတူ ပတ်စပို့တ်အနီကိုင် မြန်မာများသာ။
This entry was posted on August 23, 2012 at 1:46 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.